Ukugxininisa laser lokuvelisa okrelekrele
Nzulu kushishino izisombululo sithambe imveliso kunye nobuchwepheshe laser
Laser OMKHULU - World edumileyo uphawu kwezixhobo laser umenzi.
eyi 18 ngokuqhubekekayo ekuphuhlisweni amava kushishino laser le.
ukwazi ulwenziwo zobunewu kushishino isicelo ethile sakho.
Wuhan Golden Laser Co., Ltd. yasekwa ngo-2005 kwaye zidweliswe kwi-Growth Enterprise Market of the Shenzhen Stock Exchange ngo-2011 Le laser technology umniki solution isicelo digital yaye lizimisele ukubonelela ngezisombululo processing laser kubasebenzisi zehlabathi.
Emva kweminyaka engaphezu kwama-10 uphuhliso oluqhubekayo kunye ezintsha, OMKHULU Laser iye umenzi eTshayina ehamba kunye nehlabathi-edumileyo izixhobo laser. Entsimini isiphelo ophezulu izixhobo laser yedijithali yokuvelisa, laser OMKHULU ondiqinisileyo ephambili ubuchwepheshe kunye nophawu zalo eziluncedo. Ingakumbi kummandla eyolukiweyo, impahla kunye noshishino amalaphu bhetyebhetye izicelo laser, laser OMKHULU iye brand eTshayina phambili.
Ukugxininisa ekunikeni izisombululo isicelo laser digital, nokuhambisa kwaye ekrelekrele.
- Uncedo Iinkqubo zemveliso kwimizi yemveli ukulungiswa digital, bhetyebhetye kuphuhliso ezintsha.
Laser OMKHULU eneemfuno ezizodwa kwi-R & D, imveliso kunye neentengiso CO2 laser umatshini ukusika ,galvanometer umatshini laser kunye nefayibha laser umatshini ahlabayo . Umgca imveliso lugubungela imifuziselo ngaphezulu kwe-100 afana laser ukusika, laser ngentlabo, laser ukumakisha, laser perforating, kunye laser kwebhulorho.
Izicelo ziquka ushicilelo yedijithali, eyolukiweyo, impahla, izihlangu yesikhumba, amalaphu mveliso, ukufanitshala, izibhengezo, ushicilelo ilebhile ezingxobeni, elektroniki, ifenitshala, umhombiso, processing intsimbi kunye namanye amashishini amaninzi. A Inani iimveliso kunye nobugcisa ufumene patent zesizwe kunye nokugcinwa kwamalungelo software, kwaye CE kunye nokuvunywa FDA.
UKUSUSELA UNYAKA KA-2000
Smart Factory Workshop Intelligent
Kuba iminyaka ngeminyaka, OMKHULU Laser wasabela kakuhle ezifunwa yimarike yemveliso ezikrelekrele. Ukuhlanganisa izibonelelo zangaphakathi shishino, bahlanganise nobuchwepheshe bolwazi ukwenza izisombululo zolawulo kumasifundisane ekrelekrele. Ngexesha ukuphumeza imveliso ezikrelekrele, naye wakungenisa lula ka-time real ubuchule data imveliso umkhondo,-time real ukutshintsha, iliso-ixesha lenene, ngokuthe ngcembe ukunciphisa yokungenelela kwabantu lo gama ukuphucula umgangatho imveliso kunye nexesha delivery, azise ulawulo ngaphezulu lula.
Ekhangele phambili kwikamva, OMKHULU Laser uya ngqo sesona sisombululo shishino njengoko qhinga ephambili uphuhliso, rhoqo ukomeleza ezintsha nobuchwepheshe, izinto ezintsha ulawulo kunye ezintsha ithengiswe undoqo kwinkqubo ezintsha, kwaye sijolise abe yinkokheli laser ezikrelekrele, nokuhambisa and digital izisombululo isicelo.
WONKE ZORHWEBO UQHAGAMSHELWANO
Xa kwimarike zangaphesheya, OMKHULU Laser iye yaseka uthungelwano inkonzo urhwebo oqolileyo kumazwe angaphezu kwe-100 kunye neziphaluka ehlabathini lonke.
- Golden Laser iye yaba elithumela iimveliso laser e-China.
EZINYE abantu bethu
IMISEBENZI amangalisayo TEAM'VE YETHU negalelo kubaxumi bethu!
"UMichelle, mna ukudla entsha ngokuphathelele laser OMKHULU. Ngoku unayo iqela ngcono kakhulu. NoJoe Johnson professional kakhulu kunye nobuchule. Bayaqonda isicelo kunye impendulo ngexesha kunye ngokuzithemba. Siyavuyisana! Kunjalo kwakhona professional kakhulu kwaye ukuqonda iimveliso zakho nokuthengisa eninzi. "
"Rita, Njengesiqhelo inkonzo wakho umxhasi elibalaseleyo. Nina guys ukuba mkhulu kwaye ukuba ufuna ukutsala 'umnyele uya kuba likhwelo lethu lokuqala."
"Your Galvo laser Umatshini une zeemoto elungileyo kakhulu; ukusika okanye ukubhala (mark) ikhawuleza kakhulu, uyilo kumatshini ulungile; Umatshini ubonisa yokusebenza elungileyo; lula ukusebenza;. Lula ukwenza uhlengahlengiso"
"Lo matshini intle kakhulu. UMnu Robin elibalaseleyo. Siyakuvuyela ukusebenza naye. Luncedo kakhulu kwaye uzolile. Ndinqwenela ukuba kungekudala-odole umatshini omtsha nokumkholisa kwixesha elizayo musa ukutshintsha yamagcisa. Ithemba ukubona uqhagamshelwano ngakumbi kwixesha elizayo."